အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှသုတေသန - အသုံးပြုခြင်း - လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်အနေဖြင့်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်နှင့်အကြောင်းအရာ
တစ်ဦးကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို: အတိတ် 10 နှစ်ပေါင်း (2012) မှနည်းစနစ်နဲ့ content
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2012 ဇန်နဝါရီ; 15 (1): 13-23 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2010.0477 ။ EPub 2011 အောက်တိုဘာ 27 ။
က short ကို MB, Black က L ကို, Smith က AH, Wetterneck မှန် CT, ရေတွင်းများ DE.
စိတ်ပညာဌာန, ဟူစတန်-Clear ကိုရေကန်၏တက္ကသိုလ်, 2700 Bay Area Blvd. , ဟူစတန်, တက္ကဆပ် 77058, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အင်တာနက်ကို ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း (IP) ကိုအသုံးပြုခြင်းအတိတ် 10 နှစ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ IP ကိုအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြပြီးအနုတ်လက္ခဏာ (ဥပမာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လူ့ဒုက္ခဆင်းရဲ) နှင့်အပြုသဘော (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်လိင်ဆီသို့သဘောထားတွေအတွက်ဥပမာတိုး) နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ အိုင်ပီ၏အဓိပ်ပါယျကိုနားလညျ IP ကိုအသုံးပြုမှုရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပေးထား, အိုင်ပီအမျိုးအစားများကိုသုံးခြင်း, IP ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်အရေးကြီးပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေအတွက် IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းရရှိနိုင်ပါသည်စာပေ၏နည်းစနစ်နဲ့ content သုံးသပ်ပြီး။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏အတည်ပြုအစီအမံအသုံးပြုသွားမည်, ထိုလေ့လာမှုများ IP ကိုသတ်မှတ်ပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှာကြံ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း အသုံးပြုမှု, အိုင်ပီနှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုဆန်းစစ်နှင့် IP ကိုအသုံးပြုမှုပုံစံနှင့် function ကိုကိုင်တွယ်။ ယေဘုယျအားလေ့လာမှုများ, တိုင်းတာခြင်း IP ကိုသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတွက်ကိုက်ညီမှု ရှိ. , IP ကိုအသုံးပြုမှုပုံစံနှင့် function ကို၎င်းတို့၏အကဲဖြတ်။ လေ့လာမှုများအကြားဘယ်လိုအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်ရလဒ် impact နိုင်ပြီးတွေ့ရှိချက်ယဘေုယနိုင်စွမ်းသည်နှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့အကြံပြုချက်များကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။